A&N Titanium Steel Couple Necklace | Buy online | SHOP.COM.MM
A&N Titanium Steel Couple Necklace
I like this necklace desing. but the necklace isalittle big for girl. Read more Hide
စုံတွဲဝတ် အသည်းပုံဒီဇိုင်း ဆွဲကြိုးများဖြစ်သည်။ လော့ကတ်နှစ်ခုပေါင်းမှ အသည်းတစ်ခု ဖြစ်သောပုံစံ ထုတ်လုပ်ထား၍ အသည်းချင်းထပ်တူကျသောချစ်သူတို့ ဝယ်သင့်သော ဆွဲကြိုးလေးများဖြစ်သည်။ ရွှေရောင် ၊ ငွေရောင် နှစ်မျိုးရှိသောကြောင့် ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။အရည်အသွေးကောင်း၍ ကြာရှည်ခံပါသည်။
စုံတွဲဝတ် အသည်းပုံဒီဇိုင်း ဆွဲကြိုးများဖြစ်ခြင်း
လော့ကတ်နှစ်ခုပေါင်းမှ အသည်းတစ်ခု ဖြစ်သောပုံစံ ထုတ်လုပ်ထားခြင်း
ရွှေရောင် ၊ ငွေရောင် နှစ်မျိုးရှိခြင်း
Specifications of Titanium Steel Couple Necklace